ဆဋ္ဌမ အကြိမ်မြောက် အိမ်ခြံမြေ အရောင်းပြပွဲတွင် ငွေကျပ် ၁၇ ဒသမ ၃ ဘီလီယံကျော်ဖိုး ရောင်းချနိုင်
iMyanmarHouse.com မှ ကြီးမှူး၍ ဆဋ္ဌမ အကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး အိမ်ခြံမြေ အရောင်းပြပွဲတွင် ငွေကျပ် ၁၇ ဒသမ ၃ ဘီလီယံကျော်ဖိုး ရောင်းချနိုင်ခဲ့ကြောင်း iMyanmarHouse.com မန်နေးဂျင်း ဒါရိုက်တာ ဦးနေမင်းသူထံမှ သိရသည်။
ရေးဆွဲပြီးဖြစ်သည့် မောင်းမကန်မြို့ပြ စီမံကိန်းကို အဆင့်ဆင့် တင်ပြကာ အတည်ပြုချက် ယူရမည်
ကွင်းဆင်း ရေးဆွဲပြီးဖြစ်သည့် မောင်းမကန်မြို့ပြ စီမံကိန်းတွင် ဟိုတယ်ဇုန်၊ ဈေးဆိုင်ခန်းများ၊ အခမဲ့အများသုံး အပန်း ဖြေနေရာများ၊ ယာဉ်ရပ်နားရန် နေရာများ၊ ပန်းခြံများ၊ အားကစားကွင်းများ၊ လုံခြုံရေးစခန်း၊ ကွပ်ကဲရေး ရုံးခန်းများနှင့် အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန် နေရာများ ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး Town Plan ကိုအ ဆင့်ဆင့်တင်ပြကာ အတည်ပြုချက် ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီးမြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး မြစ်ရေတိုက်စားမှုကြောင့် တံတားများ ပျက်စီး
ကလေး စက်တင်ဘာ ၂၁
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကလေးခရိုင်အတွင်း မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ယမန်နေ့က တံတားများ ပျက်စီးကြောင်း သိရသည်။
အခြေခံ စားသောက်ကုန်နှင့် ဆေးဝါးများ လိုက်လံစစ်ဆေး
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ လယ်ဝေးမြို့ သီရိရတနာမြို့မဈေးအတွင်း စီးပွားရေး နှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာနနှင့် ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနတို့ ပူး ပေါင်း၍
Mrs. Eva. HAGERအား မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာသြစတြီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး အဖြစ် ခန့်အပ်ရန် သ ဘောတူ
Mrs. Eva. HAGER အား ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဆိုင်ရာ အထူးအာ ဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော သြစတြီးယား သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး အဖြစ်ခန့်အပ်ရန်
အောက်ဆီဂျင်ဘူးနှင့် စက်တပ်ဆင်၍ အသက်ရှူရန် လိုအပ်သည့် လူနာများအား အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိ
မိတ္ထီလာ စက်တင်ဘာ ၂ဝ
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး မိတ္ထီလာမြို့၌ အောက်ဆီဂျင်ဘူးနှင့် စက်တပ်ဆင်၍ အသက်ရှူရန် လိုအပ်သည့် လူနာများ အား ရန်အောင်မြင် လူမှုရေးအသင်းနှင့် ငြိမ်းရွှေအောက်ဆီဂျင် ဝန်ဆောင်မှုတို့ ပူးပေါင်း၍ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မြစ်သာမြစ်ရေ မြင့်တက်မှုကြောင့် လူနေအိမ်နှင့် လမ်းတံတား ပြိုကျ ပျက်စီး
လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာများ သုံးစွဲမှု သင်တန်း ဖွင့်လှစ်
မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းမှုကြောင့် ကားလမ်းနှင့် တံတား ပြိုကျ ပျက်စီး
ကလေးသူငယ် ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေး
Page 1179 of 1330